Dash bụ ego dijitalụ ị nwere ike iji zụta ihe n'ebe ọ bụla. Di ka Na olu wikipidia.org ọ bụ ego cryptocurrency chọrọ i bu ego kachasị di mfe na ụwa.
ọ bu gini ka m na akowa? Dash bụ ego di na ụdi digitalu. Otu isi nwere ike iji naira kwụọ ụgwọ maka ọrụ, ka i nwekwara ike iji ego digitalu(DASH).
Anyi bụ ndị mbụ na Naijiria maka cryptocurrency, bia nwe nnukwu aguu maka Dash. Anyi nile a hapuola naira maka Dash na eleghi anya na azu, cryptocurrency dị ka Dash bụ ihe kwesịrị mmadụ nile na Naijiria ugbu a.
Dashsquad ebumnobi bụ ịkwado Dash na Naijiria. Ebumnuche anyị bụ ka anyị gba mbo hu na mmadụ ise ọ bụla ahuru n' ụzọ abụọ n'ime ha maara banyere Dash. Anyi abiaghi ikwụpụta okwu banyere krptocurrenci ozo, ọ bụ naanị Dash.
Dashsquad choro igbanwe etu Naijiria si ahu ego .
Anyi nwere ọwara anyi na eso n'ime afo 2017, anyi meputara otutu n'ime ya eri anyi malitere.
Otu kwadoro Dash
Ogunseye Oluwajuwon Micheal:
Ọ bụ onye Ọchụnta ego, programa, onye na-ekwu na oha ma chokwa ibu ode akwukwo. Ọmalitere Ọtụtụ azumahia na cryptocurrency metutara ebe dị ka ulo aku ma otu mgbanwe.
Oke aguu o nwere maka cryptocurrency emelaya ka Ọ banye na DashSquad.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkachamara gigicoin.com ma bulu onyeisi oche nke DI (Dash Investment) nke torolari ma kariri afọ.
Chinko (你 的 手) bu kwa ihe otutu jiri mara ya na telegram, eri omatala maka Dash Ọ nebara ya anya nke ụkwụ.
Ọ bụ programa. Ọ gbajiri mkpisi na komputa sayensi. Ọ na-emeputa ihe cryptocurrency eri mgbe afọ anọ ugbua. Ọ bụ onye nchoputa nke gidicoin.com. Nke a bụ isi ihe na-aga na otutu oru na aga nke ọma.
Ọ bụ onye na-emepụta ihe nkiri, nke kachamkpa bia bụrụ kwa onye nna.
David Chinonso Mogaji
Ọ bụ onye mmepụta nke DI, weebu Dashsqaud. Ọ so na ndị nchọpụta Dash investment. Ọ bụ onye mgbasa ozi cryptocurrency ma bia gbaji kwa mkpisi na kọmputa sayensi.
Ọ bụ onye nochite na obodo na Nigeria. Ihe ama ya nke ukwu bụ na Dash activism na steeti ebe o si. Ọ bụ onye nchịkọta okwu na otu Dash na Naijiria. Ihe eji mara ya na telegram bu (Empty).
Ọ bụ onye nwere oke egwu maka komputa ruo mgbe ochoputalu maka Dash site na mkarita uka na Kaduna. kemgbe ahụ, ọ na-ekwupụta banyere Dash na agwa ọtụtụ mmadụ maka Dash na Nigeria.
Ọ bụ ọkachamara na mgbakọ na onye nwepu, ọ bụ onye okwu, na CFO ndị DI na DashSquad. Ọ bụ ya guzobere ụlọ Dash Lovers.
Kedu ihe anyị mere n'oge gara aga?
Anyi enwela nzuko ugboro ndi biara ya bu mmadu iri ano. Otu n'ime anyi bụ Pius Anyebe weputara ebe anyị ji ego Naijiria gbanwere ya na Dash, nke a mere ka ọ dị mfe maka ndị ọhụrụ.
Anyi bụ ndị mbụ wepụtara ebe ana agbanwe ego komputa na Naijiria, ma nweta ihe karịrị aha mmadụ narị atọ ma ka na etokwa.
1. Anyi ga enwe nzuko iri abuo n'ihu na onwa Novemba 2017.
2. Anyi nwere nnukwu ogbako, ihe karịrị iri abụọ agha agha Nigeria ga-ezute. Ihe nkowa ya anwụ bu.
3. A na-eme atụmatụ maka ihe ndị ọzọ a ga-eji rụọ ọrụ na Nigeria. Otu n'ime ha bụ inwe ebe nrụọrụ weebụ maka Dash na Naijiria.
Nkea bu map na uzo maka saiti ahu
I. Mkparita uka.
II. Iji dash tinye ego na ekwe nti gi na saiti ahu.
III. CMS inbuilt maka ndi dere saiti ahu.
IV. Oru azumahia ejikotara (Ngwa oru ohuru na eji ruo oru naani iji DASH)
V. Igoputa ndi oru developers maka dash Naijiria(Ikwu ha ugwo ga abu na dash)
VI. Emume na ebute mgako na nzuko.
VII. Njiko nke gidicoin API maka izuru na ire dash.
4 Anyi ga ekeputa ihe mgbanaka na kits maka dash.
5 Anyi ga ano na ogbako blockchain na Abuja site n’onwa iri na ise nke onwa a.
6 Kaduna South ga-enwe emume omenala ha, nke ihe kariri puku mmadu ato. Anyi gwara ha ka oburu Dash ka aga eji gafere uzo, zuta ihe oriri na onunu. Anyi ga aghazi nzuko maka ihe kariri mmadu nari ise tupu emume ahu, ikuziri ha banyere Dash.
7 Otu DashSquad ga asughari akuko na ozi Dash na asusu ato di na Naijiria: Hausa, Yoruba na Igbo. Anyi ga ekeputa akwukwo mpiakota na akwukwo edemede na akwukwo ndi obodo ga agu.
Ndi a bu nani ihe ole ma ole n’ime ihe anyi bu na obi imeputa tupu afo agu.